အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမိမြေနဲ့ ဝေးကွာတဲ့အရပ်မှာ နေနေကြရပေမယ့် အရေးကိစ္စကြု… – PVTV Myanmar
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကိုဝင်းဆွေ ( Burmese Community Development Collaboration) နဲ့
ကိုဘန်နီ( Myanmar Global Support Foundation) တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ နောက်အပတ်တွေမှာလဲ ကမ္ဘာအနှံ့က အဝေးရောက် ရင်တွင်းစကားသံတွေကိုလဲ ထပ်မံနားဆင်နိုင်ကြဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 6.4K Share – 270
2021-08-16 at 6:55 PM
2021-08-16 at 6:57 PM
2021-08-16 at 7:12 PM
2021-08-16 at 7:16 PM
2021-08-16 at 7:49 PM
PVTV လေးစားယုံကြည် အမြဲရှိပါသည်
2021-08-16 at 7:55 PM
Myat Min Thu says:
2021-08-16 at 8:28 PM
သားတို႔ ေမေမစု ေျပာစကားေလ ပထမ ကိုဗစ္စျဖစ္တုန္းက ေျပာသြားစကား မေမ့ဘူး လူခ်င္းေဝးေနေပမ့ဲစိတ္ခ်င္းနီဆက္ေနပါတယ္ဆိုတာ အခုက လက္ေတြ႔ပဲ လြမ္းလိုက္တာ ေမေမရယ္
2021-08-16 at 9:35 PM
PVTV, please include this gentle from Korea next time. We would like to hear his endeavour.
2021-08-17 at 4:18 PM